Missing Pieces: မန်ယူ ၄-၀ ဟောလ်စီးတီး
ယမန်နေ့ညက ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်အဖြစ် မန်ယူအသင်းနှင့် ဟောလ်စီးတီးအသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာ မန်ယူအသင်းက လေးဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားပါသည်။
မန်ယူအသင်းသည် ဟောလ်စီးတီးအသင်းအပေါ် အသာစီးကစားနိုင်ခဲ့ပြီး တိုက်စစ်မှုး ဝိန်းရွန်နီ အထူးခြေစွမ်းပြကာ တစ်ဦးတည်း လေးဂိုးသွင်းယူသွားခြင်းဖြစ်သည်။ မန်ယူအတွက်ဂိုးများကို ပွဲချိန် ၈မိနစ်၊ ၈၃မိနစ်၊ ၈၆မိနစ် နှင့် ၉၀မိနစ်များတွင် သွင်းယူပေးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုနိုင်ပွဲကြောင့် မန်ယူအသင်းသည် ပရီးမီးယားလိဒ် အမှတ်ပေးဇယားကို ယာယီဦးဆောင်ထားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် အာဆင်နယ်နှင့် ချဲလ်ဆီးတို့ ပွဲကျန်များရှိနေသေးသောကြောင့် စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။ ယခုပွဲတွင် ခြေစွမ်းပြသွားသော ဝိန်းရွန်နီသည် ယခုပွဲသွင်းဂိုး လေးဂိုးကြောင့် ပရီးမီးယားလိဒ် ဂိုးသွင်းသူအများဆုံး အဖြစ် ၁၉ဂိုးဖြင့်ဦးဆောင်နေသည်။
မန်ယူအသင်းတွင် ဂိုးသမားဗန်ဒါဆားဆက်လက်ပါဝင်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ နောက်တန်းတွင် ဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေသူ ဖာဒီနန်ပြန်ပါလာပြီး အီဗန်၊ ရာဖေးလ် ဒါဆေးဗား နဲ့ အီဗရာတို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ အလယ်တန်းတွင် နာနီ၊ ပတ်ဂျီဆန်၊ စခိုးစ် နှင့် ဖလက်ချာတို့ကစားခဲ့ပြီး တိုက်စစ်မှုးအဖြစ် ရွန်နီနှင့် အိုဝင်တို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။
မန်ယူအသင်းသည် ပထမပိုင်းပွဲ အစမှာပင် ဟောလ်စီးတီးကို အသာစီးကစားနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပထမပိုင်းပွဲစပြီး ၈မိနစ်တွင် စခိုးစ် ကန်ချက်ကို ဂိုးသမား ပုတ်ထုတ်လိုက်ရာ ရွန်နီကအသာစောင့်ပြီး သွင်းယူလိုက်သောကြောင့် ပထမဂိုး စတင်ရရှိသွားသည်။ ထို့နောက် မန်ယူအသင်းကဆက်လက်ဖိကစားခဲ့ပြီး ရွန်နီ၊ အိုဝင် တို့ ဂိုးပေါ်က်လွဲနေသောကြောင့်သာ ပထမပိုင်း ဂိုးထပ်မရခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် နာနီ ယနေ့ပွဲတွင် တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်ဘဲ ဖြတ်တင်ဘောများကို ကောင်းမွန်စွာပေးပို့ပြီး ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်သည်။
ဒုတိယပိုင်း ကစားရာတွင်လည်း မန်ယူအသင်းကသာ အသာစီးထားနိုင်ခဲ့သည်။ ရွန်နီ နှင် အိုဝင်တို့ ဂိုးထပ်ရရန်ကြိုစားသော်လည်း ဒုတိယပိုင်းအစတွင် ဂိုးကံခေနေသည်။ ဟောလ်စီးတီးက တန်ပြန်တိုက်စစ်ဖြင့် ရံဖန်ရံခါ ခြိမ်းခြောက်သော်လည်းဂိုးမရရှိပေ။ ဒုတိယပိုင်းတွင် အိုဝင်၊ စခိုးစ်နှင့် အီဗရာတို့အစား ဘာဘာတော့ဗ်၊ ဂစ်ဆင်နှင့် ဖာဘီယိုတို့ကို ထည့်သွင်းကစားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒုတိယပိုင်း ၈၂ မိနစ် အရာက်တွင် ရွန်နီက ဒုတိယဂိုးကိုသွင်းပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၈၆မိနစ်အရောက်တွင် နာနီ ဖြတ်တင်ပေးလိုက်သော ဘောလုံးကို ရွန်နီ ခေါင်းတိုက်ကာ တတိယ ဟက်တရစ်ဂိုးရယူသွားသည်။ ထို့နောက် ရွန်နီကပဲ နာကျင်အချိန်ပို ၃မိနစ်တွင် ဘာဘာတော့ဗ် ကန်တင်ပေးလိုက်သောဘောလုံးကို နောက်ခံလူများနှင့် ကြားမှ ကန်သွင်းယူလိုက်သောကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် မန်ယူအသင်း ၄ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရသွားခြင်းဖြစ်သည်။
Uploaded by turtlemaino. - Discover the latest sports and extreme videos.
Brought to you by နေတိုက်ရှိန်း at 2:52 AM
Labels: မန်ယူ, ဘောလုံး